तपाईंले कहिले भाउजु चिक्नु भएको छ?? भाउजु चिक्दा कस्तो हुदो रहेछ!! थाहा पाउने भये यो सत्ये कथा पढ्नुस्।।।।एदी लाडो ठन्क्यो भने छोल्न पनि सक्नुहुन्छ...
म बारम्बार गई रहन्थे त्यो घरमा किनकी मलाई त्याहा जानु मज्जा लाग्दथ्यो .. म रमेश दाइको कुरा गर्दैछु । रमेश दाइको बिहे भएको धेरै भएको छैन जम्मा जम्मी त्यस्तै सात बर्ष जती भएको होला । हुन त बिहे भएको त धेरै नै पहिला हो तर वहाँको पहिलो श्रीमती पोइला गएको रे मलाई त्यत्ती राम्रो सङ्ग थाहा छैन । अहिलेको श्रीमती भने सायद मेरै उमेरको होला सानै नै छ र निकै चन्चल स्वभाव को चंचल पनि किन नहोस् आखिर उमेर पनि त छ नि । म त्यो घरमा गैइरहन्थे रमेश दाइले पनि मलाई देख्न साथ बोलाइहाल्थे अनी सिता भाउजुले पनि देखेपछी बोलाईहल्थिन र मलाई पनि त्यो घरमा जानु एकदम मज्जा लाग्दथ्यो सायाद केही थियो जसले मलाई त्यो घर जानु तानी रहन्थ्यो । सदा झै म एकदिन बेलुकिको हावा खानु निस्केको थिए बाटैमा रमेश दाईलाई भेटे वहाँ कुखुराको मासु किनेर आउँदै हुनुहुदो रहेछ मलाई देखेपछी आफ्नु घर जाने कर गर्न थालनु भयो एकछिनको आनकानी पछी म लुरु लुरु रमेश दाइको पछी पछी लागे । हामी घर पुगिसकेको थियौ रमेश दाइको बुडी बाहिरनै उभिरहनु भएको रहेछ हामीलाई देख्नसाथ भित्र पस्नु भयो हामी पनि सरासर भित्र पस्यौ । नमस्ते भाउजु भन्दै म पनि भित्र कोठाको सोफामा थचक्क बसे भाउजु पनि नमस्तेको उत्तर दिदै नजिकै आएर बस्नु भयो … ख्है मासु दिनोस र तपाईं दोकान गएर आउनुहोस् भन्दै मासु को पोका रमेश दाई देखी लिएर भाउनु भान्छा कोठातिर पस्नु भयो रमेश दाइपनी एकैछिन बस्दै गर ल भाई भनेर दोकान तिर लाग्नु भयो । भित्ता को घढी मा आँखा पुर्‍याउदा बेलुकिको ७.३० भएको रहेछ टि.भी मा कुनै हिन्दी सिरिएल चलिरहेको थियो । त्यत्तिकैमा भाउजु भित्र पस्नु भयो उही मादक मुस्कान अनी हरिण को चालामा मलाई हेर्दै मुस्कुराउदै । मलाई यसरी हेरेको आज मात्रा हैन सिता भाउजुले प्राय सधैं जसो नै हेर्ने गर्नु हुन्थ्यो त्यसैले त म यो घरमा तानिएर आउथे । सिता भाउजु मेरो नजिकै आएर सोफामा बस्नु भयो अनी मेरो हातमा आफ्नु नरम नरम हात राख्दै भन्नु भयो आज तपाईंको लागिनै खास यो सब गरिदै छ नि बाबु !! म अचम्म मान्दै सिता भाउजुको अनुहारमा ताक्न थाले .. फेरी पनि वहाँ मुस्कुराउदै भन्नु भयो यो मेरो अनी रमेश दाइको मिलेमतोमा नै भएको हो !! अझै पनि म कुरा बुझ्न सकिरहेको थिएन हैन आज सिता भाउजुलाई के भएको छ ? किन यस्तो नबुझ्ने पारामा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? टि.भी तिर आँखा घुमाउदै भाउजु ले फेरी भन्नु भयो जनोस बाबु बाथरुम मा गएर हात खुट्टा धुनोस र आएर बस्नोस …. मैले हवस मा टाउको हल्लाउदै बाथरुम तिर गए .. सिता भाउजु पनि म सङ्गै उठ्दै साबुन र टावल लिदै मलाई दिनु भयो म सरासर नुहाउने कोठामा पसे । जाबो हात खुट्टा धुदा पनि किन ढोकाको चुकुल लगाउने यही सम्झेर हल्का ढोका ढेपेर त्यसै छोडि मुख धुन थाले मलाई पत्तै भएन भाउजु नुहाउने कोठामा पस्नु भएको हातमा बाल्टी थियो सिता भाउजुको मैले सम्झे शायद भाउजु पानी लिन आउनुभएको होला त्यसैले आफ्नै धुनमा मुख धुदै थिए तर सिता भाउजुले त ढोकाको चुकुल पो लगाउन थालनु भयो त म एकछिन त अलमल परे केही बोल्नै सकिन … मुटु एकदम जोड जोडले धडकिन थालेको थियो शायद अब आउने त्यो पल सम्झेर सारा शरीर नै सिरिङ्ग बनेर आयो । सिता भाउजुको हात ले मेरो हातलाई समाउदा पो म झसङ्ग भए !! सिता भाउजु निकै उत्तेजित भएकी थीइन वहाँको श्वास प्रश्वास निकै तिब्र गतिमा थियो र म पनि निकै उत्तेजित थिए तर पनि आफुले आफुलाई सक्दो स्वंयम अपनाउदै सिता भाउजुको कान मा भने दाई आउनु भयो भने के सोच्नु हुन्छ होला ? तर वहाँलाई त केही कुराको डर नै नभए जस्तो मेरो हात लगेर आफ्नु हिमालचुली जस्तो चुचो छात्ती मा छोडिदिनु भयो उफ त्यो पल कस्तो हुन्छ शायद त्यो त मलाई मात्रा थाहा होला के गरु के नगरु ? यस्तो राम्रो मौका किन गुमाउनु जस्तो पनि लाग्यो र अर्को मनले मान्दैन थियो किन कि सिता भाउजु रमेश दाइको नाशो थियो केहीछिन को लागि मलाई आफ्नै भाई सम्झेर बाहिर जानु भएको थियो फेरी म यो सब कसरी गर्न सक्छु वहाँको अनुपास्थिती मा ? तर पनि खै के भएको म आगोमा घ्यु पग्ले जस्तै पग्लिदै थिए मेरो दिमाग नै बिबेकहिन बनेको थियो त्यो समय । मैले सिता भाउजुको त्यो मोटो ओठ्मा चुस्दै पो थिए अनी मज्जाले वहाँको आनारदाना माडिरहेको थिए उफ्फ कसरी खप्न सक्नु एक जवान तरुनी केटीको समिप्य म पागल नै बने मैले सिता भाउजुको ब्लाउज भित्र हात पुर्‍याएर दुधको मुन्टोलाई मजाले खेलाउन थाले … मलाई अब कत्ती पनि अबेर गर्नु उचित लागेन छिटो भन्दा छिटो म सिता भाउजु को त्यो ठाउमा आफ्नु लिङ्ग छिराउने प्रयास मा थिए सिता भाउजु पनि शायद यही चाहन्थिन मैले छिटो छिटो सिता भाउजुको भित्री कट्टु खोल्दै आफ्नु पनि खोलिसकेर छिराउने मात्रा के प्रयास गरेको थिए ढोका खुलेको आवाजले म एकदम नराम्रो सङ्ग झस्किन पुगे । सिता भाउजु पनि हत्त र पत्त लुङ्गी मिलाउदै कट्टु त्यही बाल्टिमा फालेर ढोका खोलेर बाहिर निस्कनु भयो अनी म हाथ खुट्टा धुने नाटक गर्दै बसे ।रमेस दाइले सायद भाउजु नुहाउने कोठा बाट निस्केको देख्नु भएनछ के रे वहाँलाई थाहा नै भएन । मलाई भने खपी नसक्नु भएको थियो सो ढोकाको चुकुल लगाएर पुरै नाङ्गै भएर नुहाउन थाले नुहाउदै मैले आफ्नु लिङ्ग खेलाउदै सिता भाउजुको चुचो स्तन सम्झदै आफुले आफुलाई स्खलित बनाए . बाहिर निस्किदा सिता भाउजुले मासु पकाएर सक्नु भएछ । अब भने हामी मासु र बियर तान्नु सुरु गर्यौ सिता भाउजु हाम्रै छेउमा बसेर गफ सुन्दै हाम्रो गफमा साथ दिदै हुनु हुन्थ्यो । हामी पिउदै गई रहेको थियौ भने सिता भाउजु मज्जाले गफ दिदै बसिरहनु भएको थियो धेरै पछी रमेश दाई र मेरो कर मा सिता भाउजुले पनि २ गिलास जत्ती पिउनु भयो बियर …… पिउदा पिउदै रातिको १२ पो बजिसकेछ रमेश दाइले हात को घडी हेर्दै भन्नु भयो लु अब सुत्ने हैन त ? म पनि ल अब म जान्छु भन्दै उठे तर रमेश दाई र सिता भाउजुले आज यही सुते हुँदैन र भन्दै कर गर्नु भयो मैले पनि नाइ नास्ती गरिन हुन्छ भन्दै फेरी बसे । रमेश दाई ल भाई सुत्नु है भन्दै बेडरुमा तिर पस्नु भयो सिता भाउजु भने आउनुस् हजुरलाई म बेड बनाइ दिन्छु भन्दै लिएर अर्को कोठा म जानु भयो । मलाई कोठा मा छोडेर सिता भाउजु आफ्नु कोठा म पस्नु भयो .. मलाई कत्ती पनि निन्द्रा लागिरहेको थिएन छट्पटी लागिरहेको थियो मलाई केही छिन पहिलाको सिता भाउजु सङ्ग को कृयाकलाप झल्झली याद आईरहेको थियो साथमा रक्सी को नशा । म बिस्तारै उठेर रमेश दाई र सिता भाउजुको को सुत्ने कोठा तर्फ गए बत्ती जलिरहेको रहेछ ढोका को सानो दुलो बाट भित्र चिहाए भित्र त आम्मै … रमेश दाई उफ्रिदै रहेछ सिता भाउजु माथि म मज्जाले हेर्दै बसे … खपी नसक्नु भएको थियो मलाई म फेरी आफ्नु लिङ्ग खेलाउदै स्खलित बनाए र छिटो छिटो सुत्ने कोठा तिर गए । बेडमा पल्टिन साथ मलाई निन्द्रा लागेछ भुसुक्कै निदाएछु राती पो मलाई कसैले सुमसुमाइ रहेको रहेछ उठेर हेरेको सिता भाउजु पो त्यो पनि पुरै नाङ्गै अनी त के हुनु र झम्टे सिता भाउजु लाई अनी सिता भाउजुको योनी मा उफ्रिन थाले खाट कराउदै थियो चुइ चुई निरन्तर ….. निरन्तर …..
Posted by NEPALI SEX at 3:49 AM2comments:
तपाईंलाई चिक्ने तरिका थाहा छ कि छैन एदी छैन भने यो भिडियो डाउनलोद गर्नुहोस् वा सिदै हेर्न सक्नु हुन्छ !!! एदी लाडो ठन्क्यो भने छोल्न पनि सक्नु हुन्छ ।। ल त अब मोज गर्नुहोस् है ।।
Posted by NEPALI SEX at 7:07 AM 1 comment:
रमाइला जोक्स हरु!!!
हास्नुहोस र सोस्थ बन्नुहोस्
पेन्ती को color
एक जना केटा ले नयाँ छाला को जुत्ता किन्छ । Polish गरेर तिलिक्क तल्कने गरी लगाएर college जान्छ । एक जना जामा लगाएकी केटी को छेउ उभिन्छ । आफ्नो जुत्ता मा त्यो केटी को कट्टु को रङ हेर्छ र भन्छ,
केटा : तिमी ले आज निलो कट्टु (Penti) लगाएकी छेउ, हो कि होइन?
केटी लाज ले भुतुक हुन्छे ।
भोली पल्ट, फेरी त्यही जुत्ता लगाएर college जान्छ । उही जामा लगाएकी केटी को छेउ उभिन्छ र भन्छ,
केटा : तिमी ले आज चै रातो color को पेन्ती लगाएकी छेउ, हो कि होइन !
तेस्रो दिन, त्यो केटी पेन्ती नलगाइ college आउछ ।
जब केटा ले आफ्नो जुत्ता मा हेर्छ, अनी रुन थालछ । केटी ले किन रोएको भनेर सोध्छ, जवाफ मा भन्छ,
केटा : मेरो जुत्ता फात्यो, मैले आफ्नै खुट्टा को औंला हरु देखें ।
चरा को अन्दा
एक जना मान्छे नाङै बसेर छोली रहेको हुन्छ। अनी एक जना केटी-बच्चा ले देख्छ र सोध्छ।
बच्चा : Uncle त्यो(लिङ) के हो?
मान्छे : कुन यो(लिङ लाई देखाउदै), यो त चरा हो, आफ्नो गुंद (nest) मा बसी रहेको छ।
बच्चा : अनी यो(गुला) के हो नि?
मान्छे : यो(गुला), चरा को अन्दा (egg) हरु हो ।
एक छिन् पछी त्यो मान्छे लाई Hospital लाग्छ। अनी एक जना मान्छे ले त्यो बच्चा लाई सोध्छ ।
मान्छे : किन के गरेको तिमी ले त्यो मान्छे लाई?
बच्चा ले जवाफ दिन्छ,
बच्चा : म त्यो Uncle को चरा सँग खेल्दै थिए, चरा ले मलाई थुक्क गर्‍यो, अनी मलाई रिस उथ्यो र मैले त्यो चरा को अन्दा फुताली दिएं ।
के को फोका उठेको त्यो ?
एक जना सेक्स सम्बन्दी केही थाहा नभएको केटा को बिहे हुन्छ। सुहाग रात मा के गर्नु पर्छ भनेर उस्लाई थाहा थिएन, त्एसैले त्एतिकै सुत्छ।
अको राती केटी आफ्नो एउता दुध देखाएर बस्छ।
दुलहा : ला ! के भो तिमी लाई, के को फोका उठेको त्यो तिम्रो छाती मा ? भोली Doctor कहाँ गएर कातेर मिलाएर आउ है!
अर्को राती केटी आफ्नो दुबै दुध देखाएर बस्छ।
दुलहा : ला ! अर्को पनि फोका उथ्यो ? doctor कहाँ .................... है !
केटी लाई त अती भाई सकेको हुन्छ अनी अको रात माथि को छोपेर तल को पुती देखाएर बस्छ।
दुलहा : ला ! बर्बाद भो ! माथि को फोको (दुध) कातेर मिलाएर आउ भनेको त, तल को पो कातेर आयो ।
बस मा यात्रा
एक जना नेपाली केटा एउटा बस मा यात्रा गरी रहेको हुन्छ। त्यो बस मा अरु पनि passenger हरु हुन्छन । टेस मध्य, एक जना ईण्डियन Item Girl पनि थियो जुन नेपाली केटा को Side को seat मा एक्लै बसी रहेकी थि । बस गुर्दै थियो, तर जब Driver ले झ्याप्प brake लगायो, त्यो केटी को दुध को पोको अगाडि को seat सँग बेस्सरी मिचिन (थिछिन) पुग्यो। केटा ले त्यो देख्यो र थाम्न नसकेर केटी लाई भन्यो, "बेन्जी, आपके सनतरे पिस रहे है । (squizzing)" यो सुनेर केटी ले आँखा तर्छिन।
अनी फेरी बस गुर्न थालछ। फेरी एक छिन् पछी Driver ले झयाप्प brake लगाउंछ, Item Girl को दुध को पोको फेरी seat मा थिचिन्छ, अनी केटा ले सहन नसकेर फेरी भन्छ, "बेन्जी, आपके सनतरे पिस रहे है (squizzing) । " फेरी केटी ले आँखा तर्छे अनी मुख बिगारछे। बस पुन गुर्न थालछ।
बस गुर्दै जान्छ, तर पनि फेरी Driver ले एकदम कस्सिएर brake हान्छ। फेरी केटी को दुध अगाडि को seat मा थिचिन्छ, अब त केटा लाई एकदम भ् इे सकेको हुन्छ र जुरुक्क उठेर केटा ले Item Girl लाई भन्छ, "मेने कहा, बेन्जी आपके सनतरे पिस रही है !" तर केटी लाई पनि एकदम रिस उथि सकेको हुन्छ र उनी पनि जुरुक्क उठेर केटा लाई भन्छ, "सनतरे तो मेरे पिस रहे है, आपको यिस से क्या? " तब केटाले हत-नपत्त भनी हाल्छ, "सनतरे तो आपके पिस रहे है, पर juice मेरे से निकल रही है!" .......
Posted by NEPALI SEX at 6:16 AM No comments:
एक चोटी चिक्नै पर्ने पुती!!!
पछि, हरेक पटक पुती चिलाएको बेलामा डीजे तान्त्रिकलाई खुब सम्झन्थेँ । र सम्भिन्थेँ- डीजे तान्त्रिकले मेरा लागि किनिदिनुभएको नक्कली लाँडो । ठुलो लाँडो भएको, पुती च्यात्तिने गरेर चिक्न जान्ने, १ घन्टा सम्म ननस्टप हान्ने पुरुष मनपर्छ, मलाई । चिक्रीनारायण शाह ठुलो लाँडो भएको, पुती च्यात्तिने गरेर चिक्न जान्ने, १ घन्टा सम्म ननस्टप हान्ने सबभन्दा भव्य प्रतीक हुन् । यी तीन गुणले नै गोरखा देखि राजधानी सम्मका कुमारी केटीहरुको सिल तोड्न सम्भव भएको थियो उनलाई । हामी चिकुवा हौँ भनेर विश्वसामु गर्व गर्ने वातावरण त उनै चिक्रीनारायण शाहले बनाइदिएका हुन् नि ! त्यसैले उनी ठुलो लाँडो भएको, पुती च्यात्तिने गरेर चिक्न जान्ने, १ घन्टा सम्म ननस्टप हान्ने पुरुष हुन् । ‘सबै भन्दा धेरै चिकुवाहरुको देश’ बनाउने क्रममा यहाँ सबैका पुती ध्वस्त भए । कत्तिका पुती च्यात्तिए । जान-अन्जानमा उनको कति पटक नाईटफल पनि हुन्थ्यो भन्छन, ती गौण मानिन्छन् । धेरै चिक्नेलाइ नाईटफल त भइहाल्छ । त्यसैले उनी क्षम्य छन् । म अहिले पनि चिकुवा चिक्रीनारायण शाहजस्ता पुरुषको कल्पना गर्छु । जोदेखि म सधैँ प्रभावित छु । यसको मतलब सबै पुरुष उनीजत्तिकै ठुलो लाँडो भएको, पुती च्यात्तिने गरेर चिक्न जान्ने, १ घन्टा सम्म ननस्टप हान्नेहुनुपर्छ भन्ने होइन । डाईट नै नपाइने यो जमानामा त्यो सम्भव पनि छैन । चिक्न र चिकाउन जान्ने खूबी महिला र पुरुष दुवैमा हुनु जरुरी छ, यदि जीवनमा मोज गर्ने हो भने । पुती चाट्ने क्षमता भएका पुरुष लोभलाग्दा हुन्छन् । पुती चाट्ने क्षमता र चुस्न रहरै लाग्ने ठुलो लाँडो भएका पुरुष पलासको फूलमा सुगन्धझैँ हुन्छन् । इतिहासमा लंडबहादुर राणा यस्तै पुरुष हुन् भन्ने लाग्छ, मलाई । ग़ुलाशमशेरको पालामा पहिलो ब्लू फिल्म भित्रीए पनि, ब्लू फिल्मको लागी ईस्ट इण्डिया कम्पनीसंग लंडबहादुर राणाले नै माग गरेका थिए । मलाई पनि ब्लू फिल्म उत्तिकै मनपर्ने हुनाले पनि उनलाई सधैँ सम्मान गर्छु । किनकि, बेलायतबाट र्फकंदा उनैले डीभीडी, र चिकुवाको कलेक्सन ल्याएका थिए । उनको चिकिरहनु पर्ने व्यवहारले पनि मलाई प्रभाव पारेको हो । बेलायत भ्रमणमा जाँदा रानी एलिजाबेथकी बहिनीलाइ देखेर लंडबहादुरले भनेका थिए, ‘ म नेपालबाट गोरिनी चिक्नको लागी मात्रै आएको हूँ, यहाँ आएर मन परेकी गोरिनी चिक्न पाइन भने त्यो मान्य हुने छैन ।’ एलिजाबेथकी बहिनी न्याकेड भएर एअरपोर्टमा स्वागत गर्न आएपछि मात्रै उनले बेलायत टेकेका थिए । लाँडोको वरीपरी झांट राख्ने र गुला वारिपरी खुर्किने उनले परिकल्पना गरेका थिए । उनको यो दूरदर्शी परिकल्पना व्यवहारमा उतारिएको थियो भने आज सबैको स्टाइल त्यही हुने थियो। उनको यिनै सेक्सी नीतिले मजस्ता अरू धेरैको पुती चिलाएको हुनुपर्छ ।
Posted by NEPALI SEX at 5:05 AM2comments:
तपाईं को विचारमा कुन नेता बढी चिक्वा होला??
NUMBER OF PEOPLE VISITED THIS SITE